"Imvukuzane": Amathuluzi ipayipi yokuhlanza. Liquid yokuhlanza amapayipi "Krot": Izibuyekezo ikhasimende
Izitolo njalo ukuboniswa imikhiqizo emisha amakhemikhali yasendlini. Nokho, singamakhosikazi emizi abaningi bayaqhubeka kwalezo zimali, okuyinto bangenile bese ugcine ezinkathazweni ehlukahlukene iminyaka. Ukuze imikhiqizo enjalo kufanele kubandakanye futhi ukulungisa kanye "Imvukuzane" - uketshezi for ekuhlanzeni amapayipi. Kwaphela iminyaka eminingi, le izikhungo bayindlala kakhulu. Phela, lo mkhiqizo has a izinga elikhulu nomphumela omuhle.
Ikhambi okuvimba "Mole"
Namuhla ukulungisa okuvimba ahlukahlukene kwakheka amapayipi, kukhona esetshenziswa kabanzi kwamakhemikhali ahlukahlukene. La mathuluzi ziyoncibilika ngokuphelele zonke izinhlobo ukungcola nangempumelelo ukulwa ezifakwa okunamafutha. "Imvukuzane" ipayipi senziwe phakathi nekhulu leminyaka eledlule. Nokho, umkhiqizo namanje uyawuthanda funa eside.
Izibuyekezo Customer kwale nto ngokuyinhloko omuhle. Phela kusho ubhekana imisebenzi. It ngokushesha futhi kalula ususa noma isiphi okuvimba. Futhi konke lokhu kungenxa ngezithako zawo.
Namuhla ungakwazi ukuthenga esebenzisa "imvukuzane" ku amaphakheji ahlukahlukene kanye namafomu. Kuthengiswe umkhiqizo ifomu elilandelayo:
I ukonga kakhulu kukho - ijeli. Uma uyikha phezulu le, yena rastikaet kancane ngokwanele, sibonga ukungaguquguquki yayo obukhulu. Ngenxa yalokho, imali kuyinto ukonga okuningi. Nokho, uma ivimbekile nxa amanzi zicishe zakhubeka, kufanele usebenzise izidakamizwa, okuyinto kuveza ewuketshezi.
Namuhla ungakwazi ukuthenga ngasiphi iphakethe izidakamizwa "Mole". Amathuluzi ipayipi yokuhlanza ezipakishiwe hhayi kuphela ulwazi oluningi. ungakwazi ukuthenga isikhwama esincane, okuyinto yakhelwe kuphela izicelo ezimbalwa, uma kunesidingo. Kungenzeka futhi ukuthenga CONCENTRATE ukuthi buhlanjululwe cishe ngo 10 amalitha amanzi.
Kusho "imvukuzane": Ukwakheka
Namuhla kusho amapayipi "Imvukuzane" ikhishwa ngeendlela ezihlukeneko. On esitolo emashalofini, ungathola umkhiqizo ewuketshezi noma powder. It uhlala Ukwakheka ingashintshiwe zomuthi, yize lezi zinhlobonhlobo zezenzo ezingafanele ukukhululwa. Yini iqukethe "Mole"? Amathuluzi ipayipi yokuhlanza plan onjalo yakhiwa:
sodium hydroxide. Kuyinto isithako esebenzayo. Ingxenye yayo ekulungiseleleni imayelana 40-60 amaphesenti.
amanzi distilled. Le ngxenye eziqukethwe ukulungiselela ithengiswe ewuketshezi. Ingxenye amanzi akuyona amaphesenti angaphezu kuka-25.
Potassium hydroxide: 5 kuya angu-10.
surfactant Unionized: bengekho ngaphezu kwama-10 amaphesenti.
Ngo indima yamathebhu ku "imvukuzane" izindlela angasebenza EDTA. Njengengxenye isabelo le ngxenye - 5-10 phesenti kuphela.
Mhlawumbe abaningi bayazibuza ukuthi le "Mole". Amathuluzi ipayipi wokuhlanza yenziwe ngohlobo enjalo ukwazi ukuhlanza ngisho kanzima ukuze afinyelele izindawo. Ezimweni eziningi, kwakhiwa ukuvaleka is ku:
Izindawo lapho sihlanganisa ezingxenyeni ezihlukene, okuyizinto O-amasongo zenjoloba.
Ngamanye amazwi, lo odla kuphakama lapho kungenzeka sinamathele kobuso ipayipi. okunamafutha ifilimu ingalandwa phezu bonke ubuso izingxenye ngabanye. Yilokho, futhi unamathele izinhlayiya zezinsimbi. Ngenxa yalokho, kuholela ngowokuqala ukuvaleka amashubhu inesikhala. Kancane kancane bakha kukakhokho, okungadingi ozodlulisa mahhala namadreni kanye abakhwabanisi ku isimiso sokuthutha indle.
Ukuze sibhekane nale nkinga "Mole". Amathuluzi ipayipi yokuhlanza ukukhuthaza nokonakala, futhi ke ukuthambisa okuholela imali. Ngemva kwalokho lags ngemuva ezindongeni amapayipi kanye imfucuza amafutha nje zakhukhula ngamanzi agobhozayo.
Izwi lokuncoma iseluleko
Lapho usebenzisa i-amakhemikhali yasendlini zokususa jam ngo amashubhu kufanele sikhumbule ukuthi ukusetshenziswa kwezidakamizwa esinjalo siholela ukubukeka iphunga ezingemnandi. Lokhu zingachazwa ngezinqubo yokuthi hydrogen sulfide ikhishwe ngesikhathi noqhekeko imali calcified. Ukuze ugweme lesi simanga, kubalulekile ukukhetha indlela lapho sakhiwo isithokela samanje.
Ngaphambi kokusebenzisa indlela yokwakheka ochwepheshe batusa kancane kulungele uhlelo ngokuvula amanzi ashisayo imizuzu embalwa. Lokho ngeke kugcine ngokuthuthukisa umphumela.
Ngemva kwesikhathi edingekayo sesiphelile ngemva ethela izindlela, kubalulekile ukuba uthele mayelana ezimbili amalitha amanzi ashisayo, bese asebenze plunger. manipulations okunjalo ukuvumela izidakamizwa ukungena ngokujulile.
Ngu izimpendulo, "Imvukuzane" belungiselela ipayipi has eziningi eziwusizo. Yiziphi izinzuzo main of usebenzisa lo mkhiqizo? Nazi ezinye zazo:
Kulula kakhulu ukusebenzisa izidakamizwa "Mole". Amathuluzi ipayipi yokuhlanza batheleka imbobo abakhwabanisi. I powder kuba ukuncibilikisa, ukuthola isixazululo uketshezi lapho kudingeka. Khona-ke kufanele ulinde isikhashana, bese hashaza egijima uhlelo amanzi ngokuvula empompini. Njengoba ubona, yonke le nqubo ithatha okungenani isikhathi futhi ngezindleko eziphansi.
Quickness. Lena enye inzuzo amathuluzi ezibonisa izibuyekezo zabo ngabathengi. Sewer amapayipi ngokushesha okukhulu bahlanza by ithuluzi. On kuqedwa ngisho ukuvaleka esikhulu kakhulu ngokuvamile kuthatha imizuzu engaphansi kwengu-90.
Ayikho udoti. Labo okungenani kanye ezimpilweni zabo intambo asetshenziselwe ukuhlanza amapayipi, bayazi ukuthi kwenzeke kanjani ukuba edabukisayo. Ngemva ithuluzi inqubo kokukhipha ukuvaleka is nilimaza eziningi ukungcola, okuzodingeka ugeze off. Uma usebenzisa "Imvukuzane" lokhu akudingekile. Nokho, njengoba, akukho ukungcola.
"Imvukuzane" Izindleko ongaphakeme zomuthi. Amathuluzi ipayipi yokuhlanza kusuka kubakhiqizi angaphandle abanalo amba eqolo. Umuthi 'Imvukuzane "akuhlukile ngokuphepha nangempumelelo.
Ukuze uthole umphumela omuhle, kufanele usebenzise ithuluzi kahle. Uma umuthi ewuketshezi, kubalulekile ukuba kuntengantengise isitsha ngaphambi kokufaka isicelo ikhambi. Ngemva kwalokho, izindawo zokugeza abakhwabanisi noma nokucwila kudingeka uthele 200 kuya ku-250 namamililitha izindlela.
Phakathi yokuhlanza amapayipi kudingeka isinyathelo ngokucophelela ukuze singathwesi hit ingxenye enkulu yomzimba.
Uma "imvukuzane" ngoba amapayipi, ukubuyekezwa zazo esikhathini esiningi omuhle, in ifomu powder, khona-ke udinga uthele zithutha ukucwila, bese uthele emuva izingilazi ezimbalwa amanzi.
Emva inqubo, kudingeka ulinde amaminithi angaba ngu-90. Phakathi nalesi sikhathi, indlela kumelwe senze. Qiniseka ukuthi uxubha uhlelo ukuhlaba zingene ngokugcwele cap. Ukuze lokhu kuyadingeka ukuze unike amandla crane njengesiko, ngokuvamile ngamanzi ashisayo.
Kuyinto ingxenye ezonakalisayo endaweni "imvukuzane" zomuthi. Kungenxa yalesi sizathu, lapho esebenza ukulungiswa ezidingekayo ukugcina ezinye izinyathelo zokuphepha. Okokuqala, kubalulekile ukusebenzisa amagilavu zokuzivikela.
Uma indlela yokwakheka uthola esikhunjeni, kufanele ngokushesha geza it off usebenzisa nangokuphuza uketshezi oluningi. Uma kungenjalo, kungenzeka ngalesi siyingi kubangele ubuhlungu. Uma isikhumba sibe bomvu, kufanele abeke "Beponten".
Izinhlobo ingilazi ukuze amafasitela metal-plastic
Indlela ukuthola ifoni elahlekile ye-Android? Indlela yokuthola indawo ifoni ye-Android?
Iziqephu zekhandlela - ukwenza imali endlini